China 3K carbon fibre CNC ukusika izingxenye abakhiqizi nabaphakeli |Feimoshi
3K I-Carbon Fiber CNC Cuttingizingxenye
Ingabe uklame uhlaka lwakho futhi ufuna ukulusika?
Singakushintsha kube ngokoqobo kuwe.Siphethe izinga eliphezulu3K Twill, Matte FinishI-Carbon Fiber Plates ku-.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4 & 5mm ukujiya (kufika ku-500 X 600mm).Singakwazi futhi uku-oda okukhethekile abanye osayizi nezinhlobo zokuqeda.Wonke amaphethelo e-Carbon Fiber anenhlabathi emanzi kancane ukuze awahlanze ngemva kokusikwa.
SiyasekelaI-CNC Carbon Fiber Cutting, okuyingxenye ye-carbon fiber okuyingxenye, ithubhu ye-carbon fibre eyenziwe ngokwezifiso (i-carbon fibre tube egobile, i-Octagon carbon fiber boom)futhiIsevisi yelogo.
Material: amapuleti e-carbon fibre plates agcwele
Usayizi: 400x500mm, 500X600mm, 600X800mm, 800X1000mm noma omunye usayizi ngokwezifiso
Ubuso: 3K/1K twill/Plain matt/Glossy
Isitoko: twill matte 0.5-10.0mm amapuleti ekhabhoni agcwele esitokweni
Isevisi: i-OEM & ODM kanye nezinsizakalo zokusika ze-CNC
* Imidwebo, izithombe namasampula wamukelekile.
* Singakhiqiza imikhiqizo ngokwesidingo sakho noma amasampula.Okukhethekile okwakho.
* Sibheke ngabomvu ukuba nokubambisana okuhle nawe.
* Siyakwamukela ku-Hobby Carbon!
Q:1.Ngicela isampula ye-oda?
Umbuzo: 2. Iyini isikhathi sokuhola?
A: Isampula idinga izinsuku ezingu-1-3, ukukhiqizwa ngobuningi kudinga izinsuku ezingu-10-15, futhi ngokusho kwevolumu ye-oda.
Umbuzo: 3. Ingabe unomkhawulo we-MOQ?
A: I-MOQ yethu ingama-200pcs kukho kokubili impahla eluhlaza esemthethweni kanye nezingxenye zokucubungula.
Umbuzo: 4. Ungakwazi yini ukwamukela iqoqo elixubile lemikhiqizo ehlukene?
A: Yebo, sisekela ukuhlanganiswa komkhiqizo ohlukahlukene, akukho mkhawulo wezinto ezingavuthiwe nezingxenye eziwumshini, nokucaciswa kombala, njll.
Q: 5. Uzithumela kanjani izimpahla futhi kuthatha isikhathi esingakanani ukufika?
A: Ngokuvamile sithumela nge-DHL, i-UPS, i-FedEx noma i-TNT.Ngokuvamile kuthatha izinsuku ezingu-3-5 ukufika.
Ufuna i-Carbon 3K Fiber Manufacturer ekahle kanye nomphakeli?Sinokukhetha okubanzi ngezintengo ezinhle ukukusiza ukuthi udale.Zonke Izingxenye Zokusika ze-CNC ziqinisekisiwe ikhwalithi.Siyi-China Origin Factory ye-Carbon Fiber CNC.Uma unombuzo, sicela ukhululeke ukuxhumana nathi.
Ifektri Ukunemba okuphezulu kwe-carbon fiber CNC ukusika...